Oway Travel and Tours - Page2of5-
Dear Friends, This message comes to you straight from the heart, filled with pride and gratitude. A select few are fortunate enough to undertake journeys Read More
Monsoon Magic Sales
— By Oway May 21, 2019 Flights Uncategorized	Comments Off on Monsoon Magic Sales – Up to 50% Discount on Flights, Hotels, Express Buses, & Tours!
Monsoon Magic Sales – Up to 50% Discount on Flights, Hotels, Express Buses, & Tours!
<English Version Below> ☔️ Oway Monsoon Magic Sales! Up to 50% Discount on Flights, Hotels, Express Buses and Tours! http://bit.ly/OwayMonsoonMagicSales မှာ အခုပဲဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ! အပူချိန်လည်းလျော့သွားပြီဆိုတော့ ဒီလို မိုးဦးကာလလေးက Read More
<English Version Below> နေ့စဉ်ကျင်လည်နေရတဲ့ ငြီးငွေ့စရာပတ်ဝန်းကျင်ကနေ ရုန်းထွက်ပြီး အပန်းဖြေအနားယူချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ခရီးတစ်ခုထွက်ဖို့အတွက်လည်း အချိန်မပေးနိုင်ဘူး။ ဒီလိုမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ Staycation က အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။ “Stay” နဲ့ “Vacation” ဆိုတဲ့ စာလုံးနှစ်လုံးပေါင်းစပ်ထားတဲ့ “Staycation” ဆိုတာကတော့ ကိုယ်နဲ့နီးနီးနားနား ဟိုတယ်တွေ၊ Resort တွေမှာ Read More
“စစ်ကိုင်း” လို့ကြားလိုက်ရင် ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးရုပ်တုတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ လေးကျွန်းစင်္ကြာရပ်တော်မူဆင်းတုတော်ကြီးကို အရင်ပြေးမြင်မိမယ်ထင်တယ်နော်! သာယာတဲ့သဘာဝရှုခင်းတွေ၊ ကြည်ညိုစရာဘုရားပုထိုးစေတီတွေနဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကို သွားရောက်လည်ပတ်တဲ့အခါရောက်အောင်သွားသင့်တဲ့ နေရာတွေအကြောင်းကို Oway ခရီးသွားမိတ်ဆွေတွေအတွက် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ လေးကျွန်းစင်္ကြာရပ်တော်မူဆင်းတုတော်ကြီး စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကို သွားတဲ့အခါ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ရောက်အောင်သွားရောက်ဖူးမြော်သင့်တဲ့နေရာကတော့ လေးကျွန်းစင်္ကြာရပ်တော်မူဆင်းတုတော်ကြီးပါပဲ။ မုံရွာမြို့ ဗောဓိတစ်ထောင်သာသနာ့နယ်မြေအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ ဒီဆင်းတုတော်ကြီးဟာ ဉာဏ်တော်အမြင့် (၄၂၄) Read More
Why Taunggyi should be your next travel destinatio... 1,972 views